Apple Watch Sport ao anaty rano | Avy amin'ny mac aho
Apple Watch Sport anaty rano [sary]
Ny tsy fananana Apple Watch eo am-pelatanantsika amin'ny andro fandefasana dia ratsy kokoa noho ny tsara foana, fa ny fahafaha-mahita ny lesoka sy ny hatsaram-panahin'ilay fitaovana no faharoa manana azy io no ampahany tsara ihany. Izany no tranga fitsapana, tsikera, horonan-tsary ary fampahalalana hafa izay tonga taminay avy amin'ireo mpampiasa izay efa manana izany eo am-pelatanany ary mizara amin'ny hafa izy ireo.
Hatramin'izao dia mbola tsy nanana horonantsary manokana izahay fitsapana ao anaty rano ho an'ny Apple Watch, amin'ity tranga ity dia ny kinova Sport ary mandray an-tanana fa Apple dia mitanisa azy miaraka amin'ny fanamarinana IPX7, midika izany fa mitazona rano izy nefa misy fetrany, toa mandeha tsara ilay fitaovana.
Ny zavatra mahaliana amin'ity fanandramana ity dia ny fomban'ny mpiara-miasa FoneFox mandro amin'ny famataranandro ary avy eo dia nosedraina tao anaty dobo. SAINGY avelantsika ilay horonan-tsary izay tena zava-dehibe izao:
5 minitra nilentika tao anaty koveta iray rano rehefa avy nandro na 15 minitra nandro tao anaty pisinina mihitsy aza Tsy afaka nanohitra ny famantaranandron'ny Apple ny rano izy ireo. Ny zavatra tianay ho hita dia izay hitranga andro vitsy taty aoriana, na dia eo aza ny zava-misy fa toa mazava tsara fa ity famantaranandro amin'ny kinova Sport ity dia mahazaka rano tsara.
Raha ny marina, raha mividy iray aho dia tsy mieritreritra ny handentika azy ao anaty rano ary tsy milaza i Apple fa azo iharan'ity karazana fitsapana ity raha tsy misy fahavoazana. Fa azo antoka fa farany manana fitsapana bebe kokoa amin'ity karazana ity amin'ny famantaranandro isika ary mbola ratsy kokoa aza, izay manome antsika 'izany tombony izany' amin'ny fahalalana ny faharetany.
Raha mividy azy ianao Handena izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple Watch Sport anaty rano [sary]
estevemc dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao dia hitondrako ny famantaranandroko paoma toy ny gremlin aho. Tsy misy rano! Sao dia miandry aho
Mamaly an'i estevemc
Raha rava ny Apple Watch anao na iharan'ny fahasimbana dia tena ilaina ity torolàlana ity raha ny fahafantarana raha toa ka azo antoka izany
iMovie dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny YouTube